Soo saaraha giraanta Shiinaha PU iyo qeybiye | Ruiyi
PU giraangiraha waa xulasho caan ah oo ku saabsan codsiyada warshadaha sababta oo ah aamusnaanta ay ku shaqeynayaan marka la barbar dhigo giraangiraha adag sida birta ama birta birta ah. Giraangiraha PU-ga ayaa ah kuwo nuugaya shooga waxayna ka caawinayaan barkinta raacitaanka. Waxay sidoo kale ka nuugtaa kuuskuusyada dhul aan sinnayn. Isticmaalka PU wheel halkii birta ayaa si weyn u yareyn karta heerarka buuqa si ay uga caawiso ilaalinta maqalka shaqaalahaaga.
PU giraangiraha ku xukumaan codsiyada halka dabaqa uu muhiim u yahay. The giraangiraha PU way rogi doonaan oo ay abuuri doonaan raad ka sii ballaadhan alaabada gawaarida adag, sida nylon. Aaggan ballaadhan ayaa ka caawinaya yareynta isku-buuqsanaanta culeyska sagxadaha oo wuxuu ku hayaa qaab wanaagsan muddo dheer. Wixii dhir ah oo dabaqyadoodu qaali yihiin oo muhiim u ah hawlgalkaaga, gawaarida PU ayaa laga yaabaa inay tahay xulashada la doorbiday.
Faa'iido kale si PU giraangirahacodsiyada warshadaha waa isku dheelitirnaanta khilaafaadka maaddada. Qiimadani waxay sharraxaysaa saamiga xoogga isku dhaca u dhexeeya labada mayd iyo xoogga isku riixaya. Meelaha Rougher waxay u muuqdaan inay leeyihiin qiimeyaal wax ku ool ah oo sarreeya halka dusha sare ee jilicsan ay leeyihiin kuwa hoose sababtoo ah khilaafka ay soo saaraan marka la isku dhejiyo.
PU giraangiraha waxay u egtahay inay tahay walax murugo leh, sidaas darteed isku dheelitirnaantiisa sare ee khilaafku waxay ka caawin kartaa kaariyada jiidaya inay soo rogaan. Tixgelin muhiim ah sida iscelinku waxay dhibaato ku noqon kartaa qalabka gawaarida adag.
PU giraangiraha sidoo kale waxay bixisaa jajab aad u fiican si loo wado giraangiraha waxayna ka caawisaa yareynta xaddiga culeyska gaariga si loo gaaro xoogga wadista la doonayo.
Summad Gaariga qalabka Ruiyi
Magaca Gawaarida qalabka dibedda
Dhismaha maaddada Maro Oxford + biibiile bir ah
Cabir 82 * 56 * 6CM
qaab Qaabka Mareykanka
Tandle Buufiyo daaweynta
Xirxirida Bacda dibadda ah
Gawaarida gawaarida qaar
Eeg buuga sheyga ee rakibida gaarka ah
Ama nala soo xiriir
Qabsashada wanaagsan, ma fududa in la siibto, dhar badan u adkaysta, waxqabad raaxo leh
Hore: Xayndaabka xayawaanka
Shiinaha PU xumbo Wheel, Gawaarida Gawaarida Gawaarida, Gawaarida Caster, Shiinaha Mashiinka la taaban karo, PU Wheel, Shiinaha PU Wheel,